Cusbooneysiin Dhaqaale Dhamaystiran: Daraasad Xaaladeed oo ka socota Degmada Hennepin, MN
Maqaalka soo socda ayaa markii hore daabacay Nolosha nool abriil 23, 2018. Halkan waxaa lagu daabacaa ruqsad buuxa. Qoraalkani waa qayb ka mid ah taxane cinwaan looga dhigay, Dardar-gelinta tan! Dawlad ahaan ahaan ahaan abuuris bulsheed, kaas oo ku soo bandhiga hogaamiyaasha isgoyska sadaqada iyo dowlada oo soo bandhigaya fikradaha ku saabsan sida doolarka aan dowliga aheyn loogu adeegsan karo in lagu wado hal abuurka iyo isbedelka nidaam ee arimaha bulshada ee murugsan. The Dardar-gelinta tan! Dawlad ahaan ahaan ahaan sida bulshada loo yaqaan 'Community Innovator Community Symposium' ayaa ka dhacdey 1-da May, 2018 magaalada Los Angeles waxayna soo bandhigtay nidaamyo cusub oo wax ka beddelaya magaalooyin loo habeyn karo bulshadaada. Munaasabadda ayaa qayb ka ahayd Dardar-gelinta Magaalada, waa dadaal ay hogaamineyso Magaalooyinka Nolosha oo ay taageerayso Citi Foundation. Macluumaad dheeri ah, dhagsii halkan.
"Sunaamiinta lacagta ah" - wakhti dheer oo la filayay in ay hawlgab noqdaan sida boomers da'doodu ka yartahay xoogaga shaqaalaha - ayaa ku dhuftey qaybo yar oo dhaqaalaha sida adag sida qaybaha dawladda. Shaqaalaha dawladdu waxay u muuqdaan kuwo duqoobay oo aad u sarreeya oo ka badan kuwa ka shaqeeya guud ahaan shaqaalaha. Waxay sidoo kale u muuqdaan inay joogayaan shaqooyinkooda wakhti dheer ayna ka fariistaan da'da yar.
Degmadda Hennepin ee Minnesota waxay ka tarjumaysaa isbeddelladan. Gobolka, oo ah qaybta labaad ee dawladda ugu weyn ee dawladda, ayaa rajaynaysa in mid ka mid ah saddexda shaqaalahoodu ay ka fariistaan sannadka 2020 illaa iyo badhka sannadka 2025. Tirada shaqo la'aanta (3.1%), kororka tirada dadka, iyo korodhka baahida loo qabo tayada abuuritaanka shaqaale ku filan oo ku filan 128,000 oo gobolka oo dhan laba sano gudahood. Waxaa intaa dheer, Minnesota waxay leedahay qaar ka mid ah shuruudaha shaqada ee jinsiyadaha ugu caansan uguna adag ee wadanka.
Sidaa daraadeed, sannadka 2014, iyada oo ay jiraan dhibaatooyinkaas labaatanka ah ee ku haynaya habeenkii, Maamulaha Hennepin County David Hough wuxuu bilaabay inuu ka fikiro siyaabaha loo qaadanayo habka hanti-ku-saleysan ee horumarinta shaqaaleynta mustaqbalka. Waxa uu la yaabay, iyada oo la siiyay naqshadaynta naafanimada, sidee loo ogaan karaa talada ilaha gobolka ee dadka degan taariikh ahaan laga reebay dhaqaalaha? Tani waxay wax ka qaban doontaa dhibaatooyinka dhowaan soo foodsaartay iyo dhisaan shaqaale kala duwan oo kala duwan.
Iyadoo taageero lacageed iyo farsamo ka soo McKnight Foundation iyo wadashaqeyn la leh Shabakadda Shaqaalaha Ganacsiga ee Minneapolis St. Paul (MSPWin), gobolka ayaa aasaasay kaabayaal dadweyne / khaas ah si loo bilaabo xidhitaanka farqiga shaqada ee gobolkeena. Tani waxay horseeday markii hore barnaamijka waddooyinka xirfadaha kaalmada u-qalmitaanka, maamulka xafiiska, iyo hawlaha dhismaha.
Saddexda sano ka yar, gobolka ayaa shaqaaleysiiyay in ka badan 160 waddooyinka qalin jebiyey. Iskaashatooyinka loo shaqeeyaha waxay qabteen 135 kale, iyada oo in ka badan 150 qof ay tababar ku qaadanayaan in ka badan daraasad kale oo loo shaqeeysto oo badan oo loo shaqeeysto, oo ku saleysan qaybta mihnadeed.
Wadiiqooyinka waxay furan yihiin fursado shaqo oo loogu talogalay bulshooyinka midabka leh. Laga bilaabo 2015, 58.9% wadooyinka qallalan ee shaqaalaysiinta by gobolka ayaa ahaa dad midab leh marka la barbardhigo 39% oo ka mid ah kuwa la shaqaaleeyey iyada oo loo marayo hababka kireysiga dhaqanka. Daraasad horudhac ah ayaa muujinaysa in 140% korodhka mushaarka ee qalinjebinta wadooyinka iyo in ka badan 80% ka haynta shaqada degmada kadib hal sano, maalgashatada hore waxay ku soo noqdeen 12 ilaa 18 bilood.
Degmadu waxay u adeegtay qaabka istiraatiijiga ah ee shaqo-helidda, iyo qaybta ganacsiga gaarka ah ayaa soo saaray digniin. Siddeed iyo toban shaqo oo wadajir ah oo shaqo-wadaag ah ayaa hadda bixiya dhuumo cusub oo tiknoolajiyaal ah si loo kordhiyo tirada shaqo-bixiyeyaasha ee qaybaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa guud. Habka jihooyinka xirfadaha ayaa sii kordhaya. Iskaashiga cusub ee adeega shaqada ee caadiga ah iyo kulliyadaha beesha iyo kuwa farsamada ayaa waxay abuurayaan xiriiro cusub iyo siyaabaha ganacsiga dhexdooda ee hay'adahaas.
Iyada oo taageero dheeraad ah laga helayo deeqaha, ayaa gobolka uu abaabulay istaraatiijiyad qaybta gobolka ee loo shaqeeyayaasha dawladda ee u heellan sidii loo dhisi lahaa dowlad awood leh oo kala duwan oo badan, gobol iyo degmo. Dadaaladani waxay ku siinaysaa habka warshadaha ee looga saari karo caqabadaha ku lug leh hirarka shaqaaleynta dhaxalgalka ah, isku duwidda baahida shaqaaleynta, isku-duwidda hawlaha ururada iyo la-hawlgalayaasha tababarka, iyo in si ka sii wanaagsan loo qaabeeyo nidaamka shaqaale ee dadweynaha.
Anaga McKnight, fursada ah in aan ka mid noqono dadaalkani wuxuu ahaa labadaba sharaf iyo sharaf. Nidaamkan cusub ee horumarinta shaqaalaysiinta, oo hoggaamiya hoggaaminta khaaska ah ee dawladaha hoose, ayaa horay u xoojiyay gobolka maanta iyo caawinta inaan si fiican u qabanno dhaqaalaha guud ahaan berrito.